नवलपरासीका उखु किसान आन्दोलित - कृषि पत्रिका
नवलपरासी। हरेक वर्ष उखु भुक्तानीको विषयलाई लिएर आन्दोलनमा उत्रिएका पश्चिम नवलपरासीका उखु किसानहरू यस वर्ष पनि आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । अघिल्लो वर्षको रकमसमेत नपाएका किसान यस वर्ष पनि चिनी उद्योग समयमै सञ्चालनमा नआएकै कारण हरेक वर्षजस्तै अहिले पनि आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन् । पश्चिम नवलपरासीमा लुम्बिनी चिनी उद्योग, वाग्मती चिनी उद्योग, इन्दिरा सुगर मिल्स र मोहिनी चिनी उद्योग गरी चार ठूला उद्योग रहेका छन् ।
ती उद्योगबाट किसानले अघिल्लो वर्षको गरी करिब रु. ५० करोडभन्दा बढी रकम लिन बाँकी छ । तर चिनी उद्योगले रकम दिन विभिन्न बाहना बनाउँदै आएका छन् । अघिल्लो वर्षको भुक्तानी शुरु गर्नुपर्ने र शुरुमै मूल्य निर्धारण गरी तत्काल सबै चिनी उद्योग सञ्चालनमा आउनुपर्ने उखु उत्पादक कृषक समिति नवलपरासीका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादव बताउनुहुन्छ ।
चिनी उद्योग सञ्चालकले भने थोरै थोरै रकम भुक्तानी गरी यस वर्ष पनि उधारोमा उखु लिन दाउमा देखिन्छन् । किसानले भुक्तानी शुरु गरेर मात्र चिनी मिल सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राख्दै चिनी उद्योगमा धर्ना दिएर आन्दोलनको शुरुआत गरेका छन् ।
उद्योगमा रहेका चिनी बिक्री नभएकाले रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको भन्दै उद्योग सञ्चालक आलटाल गर्दै आएको पाइन्छ । इन्दिरा सुगर मिलका मालिक राकेश अग्रवालले किसानको करोडौँ रकम तिर्न बाँकी छ । उद्योगमा रहेको करोडौँ मूल्य बराबरको चिनी र मोलासिस बिक्री भएको छैन । बिक्री भएपछि सबै रकम भुक्तानी दिने उहाँले बताउनुभयो ।
पश्चिम नवलपरासीका उखु किसानले चिनी उद्योगलाई अघिल्लो वर्ष उधारोमा उखु दिएबापतको रकममध्ये अहिलेसम्म पनि करिब रु. ५० करोड भुक्तानी पाएका छैनन् । चिनी उद्योगलाई उधारोमा दिएको उखुको भुक्तानी नपाएका किसान यस यस वर्ष पनि समयमै उखु मिल सञ्चालन नहुँदा मर्कामा परेका छन् ।